Cuntada baasto ee ay kujiraan Shrimp iyo Lemon - Caafimaadkaaga hagaaji - TELES RESAY
ACCUEIL » rasiidhada »Reepe - Shrimp & Lemon Recipe - Hagaajinta Caafimaadkaaga
TELES RELAY 3 August 2019
Shrimp iyo baasto baastada ayaa lagu raaxeysan karaa koorsada ugu weyn. Ama saxan keliya, iyadoo kuxiran tirada. Waxay sidoo kale ku habboon yihiin dadka aan u dulqaadan karin in ay ku jiraan maadada laaktooska iyo gluten, haddii aad doorato baastada ku habboon celiacs. Intaa waxaa u dheer, waxay u dacwoonayaan carruurta iyo dadka waaweynba waana habka ugu wanaagsan ee loogu daro kalluunka cuntada cunnuga.
Faa'iidooyinka baastada oo dhameystiran
Si saxanka looga dhigo mid dhammaystiran, waxaa lagu taliyaa in lagu beddelo baastada dhaqameed baastada oo dhan, ku saleysan burka aan hadhuudhka lahayn.
Baastada oo dhami waxay leedahay maaddo karbohaydrayd leh oo sare (75 garaam oo garaamyada loo yaqaan '100 garaam'), oo sameeya cunno aad u firfircoon, oo ku habboon in wax la cuno inta aan la qaban firfircoonaanta jirka ee sarreysa
Macronutriyahanadan la keenay waa mid nuugitaan ah, si tamarta si tartiib tartiib ah looga soo daayo, kaas oo kaa caawinaya sii wadida dareenka buuxsanaanta muddo dheer.
Qaadashada dufanka ayaa ah mid aad u hooseysa oo ka kooban sterols dhirta iyo iyada oo aan lahayn kolesteroolka, sidaa darteed waa cunno caafimaad leh oo loogu talagalay wadnaha waxayna ku habboon tahay cunnooyinka cunnooyinka la waafajiyay si loo xakameeyo hypercholesterolemia. Intaa waxaa sii dheer, saxankani waxa ku jira xaddi badan oo ah fiber dhirta Tani waxay kor u qaadeysaa xakameynta kolestaroolka iyo gulukoosta dhiigga.
Akhriso inbadan: Cawaaqib xumada '6' ee isticmaalka cabirida barafka la safeeyey
Shrimp waa cufan muuqaal ah oo muuqaal ah oo dhadhan u leh prawns-ka, laakiin way ka yar tahay oo waxay leedahay anteeno dheer. Waxay u keentaa 80 kcal oo loogu talagalay xNUMX garaam oo ka mid ah qaybta la cuni karo isla markaana leh maaddo sare oo biyo iyo borotiin ah.
Alaabtaani waxay ka kooban tahay heerarka kolostaroolka aad u sarreysa. Runtii, hal qaadasho ayaa dabooshaa kala badh heerarka kolestaroolka ee lagula taliyo cunno caafimaad leh iyo isku dheelitiran. Si kastaba ha noqotee, haddii loo isticmaalo si dhexdhexaad ah oo lagu daro cuntooyinka dufanka yar sida baastada, wax dhib ah kuma jiraan in lagu daro cuntada caafimaadka leh.
Shrimp waxa ku jira boqolkiiba aad u sarreeya oo macdanta daruuriga ah sida iodine, zinc, potassium iyo fosfooras. Waxay kaloo ka kooban yihiin tiro aad u badan fitamiin B12 : qayb ka mid ah noocyadan qolofta leh waxay labanlaabaysaa qaadashada lagu taliyay in la qaato maalin kasta ee nafaqada.
Sidoo kale soo celi: Noocyada 6 ee kalluunka looga fogaado
Baastada leh shrimps iyo liin
Mar haddii la fahmo astaamaha nafaqada ee ka kooban maaddooyinka ugu waaweyn, waxaan ku siinaynaa maaddooyinka iyo sidoo kale tillaabooyinka la raaco ee lagu horumarinayo karinayo.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin (4 dadka)
300 garaam oo baastada ah
250 garaam oo shrimp ah
150 g cream farmaajo
Marka hore digsi kululeeya kuleylka dhexdhexaadka ah laba qaado oo ahsaliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeraad ah iyo, mar heerkul ah, ku dar darbigi hore ee la maydhay oo diiri.
Iyaga kari iyaga 7 daqiiqado 10 ama ilaa brown dahabka. ka dibna, ka qaad oo ku dheji tuwaal waraaq ah si aad uga saarto dufanka xad dhaafka ah.
Isku shaandhee liinada adiga oo aan gaarin qaybta cad, u dhig si aad u qurxiso hadhow oo u googoo gogo yaryar.
Ka dib, isla skillet-ka loo isticmaalay in loo sameeyo shrimp, ku dar gogo 'miro. Walaaq inaad ka caawiso iyaga siideynta casiirkooda.
Dhanka kale, ku kari ilaa hal litir oo biyo ah saliid iyo cusbo oo kari kari baastada si waafaqsan tilmaamaha xirmada.
Marka liin-darka ay soo saaraan dheecahooda, ku tirtiro labo kareem oo jikada ah. ka dibna, ku dar farmaajada kareem.
Hadaad rabto inaad hesho dhanaan wanaagsan, waxaad ku dari kartaa dhowr qaado oo biyo karinta baastada ah.
Baastada ku dhex dar digsiga digsiga iyo maraq.
Ku dar milix iyo basbaas kuna dar budada toonta, basil iyo jiirka. Saxankaagu wuxuu diyaar u yahay inuu dhadhamo!
Waxaad ku beddeli kartaa jiiska kareem leh diyaarinta soy ku habboon vegans iyo dadka aan dulqaadasho lahayn ama jiis la'aan. Waxaad kaloo dooran kartaa baastada ku habboon baahidaada. Cuntadani waxaa si wanaagsan ula socda salad salad ah ama kareem khudradeed oo loogu talagalay qado nafaqo leh oo isku dheellitiran ama casho ah.
Soo hel cuntooyinka 3 ee kariska baastada Talyaani
Baastada Talyaani ah waa mid ka mid ah cunnooyinka ugu caansan uguna caansan dunida. Soo hel cuntooyinka 3 ee kariska baastada Talyaani. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/recette-de-pates-aux-crevettes-et-au-citron/